Ukwakha indlu enkulu kwiNtaba yeFanjing. Yunman Sunshine Dongzhai Tatami Big Bed Room Qiaosha - I-Airbnb
Ukwakha indlu enkulu kwiNtaba yeFanjing. Yunman Sunshine Dongzhai Tatami Big Bed Room Qiaosha
Igumbi lakho lokulala e i-kezhan sinombuki zindwendwe ongu芸
Le ndlu ikwindawo entle kakhulu yeSha Dong Village kwiXia Village yaseFanjing Mountain, kwaye ngaphandle kweefestile ezinkulu zomgangatho ukuya eluphahleni kukho iqela lezindlu zamaplanga ezenziwe ngesitayela seDong ezinezithethe ezinkulu zobuhlanga. Kukho i tea tables ne tea sets ezigqwesileyo endlini ka tatami. Kungakhathaliseki ukuba umoya, imvula okanye ilanga ngaphandle kwefestile, unokuhlala kwigumbi elikhululekile. Kukho ikhitshi elizisebenzelayo elihlawulelwayo elifumanekayo ngezantsi. Iyonke iDong Village ijikelezwe ziintaba namanzi, inembonakalo entle, kwaye amasiko esintu alula kwaye anomoya wokubuk' iindwendwe. Rhoqo ngeempelaveki kubakho itheko lomlilo elinesikweri elinamasiko amakhulu obuhlanga. Lolona khetho lulungileyo lohambo oluya kwiNtaba yeFanjing.
Ifumaneka kwiikhilomitha ezimbini ngaphantsi kweNtaba yeFanjing, iYueshang Village yaseSha Dong Village ikulungele kakhulu.Ijikelezwe yimifudlana kunye namanzi, iintaba eziluhlaza zifihliwe, kukho ukutya okuninzi kwidolophana, kwaye kukho imiboniso ekhethekileyo ye-Dong ngeempelaveki kunye nomthendeleko wangokuhlwa. Yeyona ndawo ilungileyo yokumisa uhambo oluya kwiNtaba yeFanjing!
Eli gumbi likwilali yaseDongzhai, elungele ukuzonwabisa kunye nokutya. Izitya ezisasazwe kakhulu zasefama eDongzhai Village zimnandi kwaye ziyafikeleleka. Kumgama weemitha ezingamashumi amahlanu ukusuka kwiDong Village, jikela ngasekhohlo kwindlela ejikajikayo, kwaye kukho indawo enencasa yamanzi.Iti yobisi enencasa yepesika iyimfuneko endlwini yakhe. Kukwakho neentlobo ngeentlobo zeziselo zewayini yerayisi. Indawo elungileyo yokuphumla.
Umbuki zindwendwe ngu- 芸
Ukususela ngo-6:30 ukuya ku-23:30, unokucela iimpendulo kunye noncedo kwidesika engaphambili ukuba unayo nayiphi na imibuzo.